Yan Aung: ScrollBox ထည့်နည်း
ကျေးဇူးပါ.. ကျမ ယူသုံးလိုက်ဦးမယ်။
ကြိုဆိုပါတယ် မလေး. အဆင်ပြေပါစေ...
ကိုရန်အောင် ကျေးဇူးနဲ့ ကျွန်တော် ဘလော့တစ်ခု ရေးနေပြီ
I am using this format too.
အစ်ကို့ပို့စ်တွေကြောင့် ကျွန်တော် blog တစ်ခု ကြည့်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား... ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခု ရှိလို့ပါ.. ဒီ scroll box လေးတွေထဲမှာ စာတွေရေးထည့်ပြီး Justify ပေးလိုက်ရင် စာတွေက ဘေးက scroll bar နဲ့ ကပ်သွားတယ်.. အဲဒါကိုခွာဖို့ margin တစ်ခု ဘယ်လိုထည့်ရမလဲလို့ပါ... ကျွန်တော်ပြောတာရှုပ်နေရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ blog ကို အစ်ကိုလာကြည့်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား... အစ်ကိုအားရင် တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီး ကူညီပါဦးခင်ဗျား... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ခင်ဗျားရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ သိပ်မခက်လှပါဘူး.
Justify လုပ်မြဲလုပ်နိုင်ပါတယ်. အဓိကဖြစ်ရတာက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစာလုံးဖောင့်ရဲ့ စပေ့စ်တွက်ပုံက အင်္ဂလိပ်ဖောင့်တွေနဲ့ မတူဘဲ နေရာပိုစားနေတတ်လို့ပါ.
ဆိုလိုတာက အင်္ဂလိပ်လို စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရိုက်ပြီး Justify လုပ်ကြည့်တာနဲ့ မြန်မာလို စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရိုက်ပြီး Justify လုပ်ကြည့်တာ မတူညီတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်.
ရိုက်တော့ရိုက်တာပဲ.ဒါပေမယ့် Justifyလည်းလုပ်ရောစာတွေက ဘေးကပ်ချင်ကပ်အောက်ကျချင်ကျနဲ့တကယ့်ကို ကို့ယိုးကားယားကြီးပါပဲ.
ရိုက်တော့ရိုက်တာပဲ. ဒါပေမယ့် Justify လည်းလုပ်ရောစာတွေက ဘေးကပ်ချင်ကပ် အောက်ကျချင်ကျနဲ့တကယ့်ကို ကို့ယိုးကားယားကြီးပါပဲ.
ရိုက်တော့ရိုက်တာပဲ. ဒါပေမယ့် Justify လည်းလုပ်ရော စာတွေက ဘေးကပ်ချင်ကပ် အောက်ကျချင်ကျနဲ့ တကယ့်ကို ကို့ယိုးကားယားကြီးပါပဲ.
ဒီလောက်ဆိုရင် xybo သဘောပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်. စပေ့စ်လေးတွေ ခံပြီး ရိုက်သွားရင် စာကြောင်းလေးတွေ ညီလာပါလိမ့်မယ်. တစ်ချို့နေရာတွေမှာ သိပ်ပြီး မညီမညာဖြစ်နေရင် စကားလုံးလေးတွေကို ခွဲခွဲပြီး ရိုက်သွားပေးပါ. Manually manipulate လုပ်သွားမှပဲ ရမှာပါ.
ကိုကြီးရန်အောင် ကျွန်တော် scroll box လုပ်နည်းလေးကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ
ဘယ်လိုမှကို adjustment ညှိမရဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ကူညီနိုင်လျှင်ကူညီပါအုံး။ manual manipulate လည်း ကြိုးစားလုပ်ကြည့်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်ပဲ ညံတာလား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုတေ့ာ လိုနေတယ်ထင်တယ်ဗျ။